We.com.mm - ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေဟာ ဒါတွေမလုပ်ပါဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်တယ်။ အော် နှစ်လုံးထဲနဲ့ကပ်ရှုပ်နေတယ်။ ဒီလိုကွာ။ သူတို့က perfect ဖြစ်ချင်ယောင်မဆောင်ဘူး။ မေးခွန်းတိုင်းကို ဖြေနိုင်ချင်မှဖြေနိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အရည်အသွေးကိုယ် ယုံကြည်တယ်။ ပိုရှုပ်ကုန်ပြီလား။ ဒီလို ဒီလို။ confident ရှိတဲ့သူတွေဟာ…..
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘယ်လိုမှ မတူညီနိုင်ဘူးလေ။ ဒါကိုလိုက်နှိုင်းယှဉ်နေရင် ရူးသွားမှာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာ ဘယ်သူနဲ့မှလိုက်မနှိုင်းယှဉ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ တိုးတက်အောင်ကြိုးစားတယ်။
Confident ရှိသူတွေဟာ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို ကိုယ်လက်ခံတယ်၊ ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ်တာဝန်ယူတယ်။ ဆင်ခြေမပေးဘူး။ ကိုယ်တိုင်က perfect မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို လက်ခံသလို တခြားသူတွေ perfect ဖြစ်ဖို့လည်း မမျှော်လင့်ဘူး။ အမှားလုပ်တယ်၊ ဆင်ခြေပေးမနေဘူး၊ ချက်ချင်းထပြင်လိုက်တယ်။
၃. မစဉ်းစားပဲ မထောက်ခံဘူး
Confident ရှိတဲ့သူတွေက ဉာဏ်ကို လွှာပြီးသုံးတယ်။ သူများပြောတိုင်းမယုံဘူး။ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ် စဉ်းစားပြီးမှ လက်ခံတယ်၊ နားထောင်တယ်။ ဒါက နားကောက်တာမဟုတ်ဘူး။ လက်တွေ့ဆန်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။
၄. လဲကျတဲ့နေရာမှာ ရပ်မနေဘူး
လက်တွေ့ကျသူတွေပီပီ အရှုံးတွေကိုလည်း ရဲရဲကြီးလက်ခံတယ်။ ဘဝဆိုတာ အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲလေ။ လူတိုင်းဟာ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာ ကျရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာသိလို့ စိတ်ကိုလည်း ပြင်ဆင်ပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ။ Confident ရှိတဲ့သူတွေက ပြဿနာတစ်ခုကနေ ထွက်ပြေးဖို့ထက် အဖြေရှာဖို့ကိုသာ စိတ်အားထက်သန်သူတွေဖြစ်တယ်။
သူတစ်ပါးကို တိုးလျှိုးတောင်းပန်ပြီး အကူအညီတောင်းနေမယ့် သူတွေမဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်းက ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ရှုပ်နေမှန်းနားလည်ထားတယ်။ သူများဆီက ရယူဖို့အတွက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခု မတည်ဆောက်ဘူး။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ တော်ရုံတန်ရုံ ဘယ်သူ့အကူအညီမှလည်း မယူသလို၊ ခွင့်လည်းတောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။
၆. အဆိုးမြင်တဲ့သူတွေကို လျစ်လျူရှုတယ်
ကိုယ့်ဘဝအတွက် ဘာမှသိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိရင် သူများတွေရဲ့အမြင်တွေကို ဂရုစိုက်မနေဘူး။ လူတစ်ကိုယ်စိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် ပြောချင်ရာပြောကြမှာပါ။ ဒါကို confident ရှိတဲ့သူတွေက သဘောပေါက်တယ်။ ဘယ်သူ့စကားကို နားထောင်သင့်တယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ အရေးမပါတဲ့ အဆိုးမြင်ဝါဒီသမားတွေကြောင့် အာရုံနောက်မခံဘူး။
၇. သူများအကြောင်းပြောပြီး အချိန်မကုန်ဘူး
Confident ရှိတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ဘဝကိုယ်သာ အရေးစိုက်တဲ့အတွက် တစ်ခြားအရေးမပါတဲ့သူတွေအတွက် အချိန်မပေးဘူး။ သူများအတင်းထိုင်တုတ်နေဖို့ဆိုတာဝေးရော။ ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ သူများအတင်းလိုက်တုတ်နေသူတွေက သေချာတယ် confident မရှိတဲ့သူတွေ။
လူတိုင်းမှာ အကြောက်တရား တစ်ခုခုတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ Confident ရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူနဲ့ကွာခြားတာက confident ရှိတဲ့သူက အကြောက်တရားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုမခံဘူး။ သူတို့ကြောက်နေရင်တောင် လုပ်သင့်တာကို ဆက်လုပ်တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့သူတို့ဘဝရဲ့အကြောက်တရားတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ အောင်မြင်မှု ရယူကြတယ်။
၉. Comfort zone မှာပဲ မနေဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျိုးထောင်တယ်။ သက်တောင့်သက်သာနေရတဲ့ဘဝထဲမှာပဲ နစ်မွန်းမနေဘူး။ ကြွက်သားဆိုတာ လေ့ကျင့်မှထွားတယ်၊ ဦးနှောက်ဆိုတာ သွေးမှထက်တယ် ဆိုတာကို နားလည်တယ်။ ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်တောင် ရအောင်တိုးထွက်ပြီး အောင်မြင်ဖို့လုပ်တယ်။
Confident ရှိတဲ့သူတွေက အလုပ်တစ်ခုကို တိုးလို့တန်းလန်း ဘယ်တော့မှ မထားခဲ့ဘူး။ ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ပြီးမှ စိတ်သက်သာရာရကြတယ်။ ဘယ်လောက်သေးတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် ပြီးတဲ့အထိလုပ်တယ်။ လက်ရှိအချိန်က အကောင်းဆုံးပဲလို့ခံယူပြီး ချက်ချင်းထလုပ်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်။ ပျင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ဆိုပြီး အချိန်ဆွဲမနေတတ်ဘူး။ ဒီလိုပဲ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ရင်လည်း ချက်ချင်းဖြေရှင်းရမှ ကျေနပ်ကြတယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲက အချက်တော်တော်များများနဲ့တူနေပြီဆိုရင်တော့ သင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့သူပဲပေါ့။
Ref; Personality Buzz
ဂျပု ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး (၁၅) ခု
ပြုံးဖို့အတွက် အကြောင်းပြချက်တွေ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခါ…
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစလုပ်တဲ့သူတွေကို ကျရှုံးစေတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ခု